6 Keyword Tsvaga Zvishandiso | ECommerce nhau
Kukwezva kwetraffic ndicho chimwe chezvinangwa zvikuru mune zvemadhijitari. Kubva pane yakajairwa nzira, imwe yemakiyi iri mukuve nesimba rine kiyi yekutsvaga maturusi. Chichava chimwe chezvinhu zvinotarisisa zvikuru kuti zviunze traffic yakawanda uye wedzera huwandu hwekushanyira kune peji rewebhu. Chero zvayakaita kana bhizinesi modhi. Nemhedzisiro mhedzisiro pazviri uye izvo zvinowoneka nekuwedzera mukutengeswa kwezvigadzirwa kana masevhisi anotengeswa kubva kumatekinoroji madomeni.
Mukati meichi chirevo chizere, hapana mubvunzo kuti isu tinogona kuve nematanho akakosha ekutsvaga ekushandisa ekupedzisira ichatibvumidza isu tese kuzadzisa zvinangwa zvedu nemigumisiro yakaisvonaka. Mune zvimwe zviitiko, zvakare pasina kufungidzira chero mari yemubhadharo uye izvo zvinogona kutibatsira kuti tiwane mabhadharo ayo chero bhizinesi mune zvemagetsi zvekutengeserana anoda. Panguva iyo iyo mamiriro ezvehupfumi anogona kukanganisa kuvandudzwa kwedhijitari chirongwa kana bhizinesi.
Kuti uwane zvinangwa zvehunyanzvi izvi, hapana mubvunzo kuti kunyatsoisa webhusaiti mumainjini ekutsvaga chinhu chakanyanya kukosha pakutanga kwenzira iyi. Asi kuitira kuti zviitwa zvepaindaneti zvive zvinobatsira zvechokwadi, hatizombosarudzike kunze kwekufunga chero eanotevera mupiro kubva zvino zvichienda mberi:
Chii chedu digital business?
Chii icho chigadzirwa, sevhisi kana chinhu Chii chaunopa kune vashandisi?
Makadii vatengi kana vashandisi ndiani wauri kutaura naye?
Chii ichocho zvinangwa zvaunofunga mune rako bhizinesi rehunyanzvi?
1 Keyword ekutsvaga maturusi: kuwana kune ane simba enjini dzekutsvaga
2 Soovle kubvunza yekutsvaga injini data
3 Google Keyword Kuronga kweAdwords
4 Google Correlate, chishandiso chinoshanda zvakanyanya
5 Tsvaga yakanyanya kutaurwa yakakosha jenareta
6 Keyword In yekubatanidza mazwi pamwe nemumwe
Keyword ekutsvaga maturusi: kuwana kune ane simba enjini dzekutsvaga
Kubva pane iyi nzira mukushambadzira kwedhijitari, iwe unobvumidzwa kutsvaga mazwi akakosha kubva kune mamwe mazwi akakosha kana kunyangwe kune imwe nzira. Iri zano rinoshanda kwazvo, kwete kungoisa domaini rako paInternet. Asi zvakare kukwidziridza iko kuvhiya kubva kune akanyanya matsva manejimendi mamodheru
Imwe mukana wekushandisa chishandiso ichi kugadzirisa webhusaiti inoenderana nechinhu chiri nyore sezvazviri tsvaga anokwikwidza kero yedomain kana kunyangwe kubva pawebhu peji rine zvakafanana maitiro kune ako. Zvekuti nenzira iyi, unogona kuzviisa mumainjini nekukurumidza. Uye nekudaro inotora yakanyanya kuwanda yekushanya iyo inozooneka gare gare mukuonekwa kwevatengi vatsva kana vashandisi.
Soovle kubvunza yekutsvaga injini data
Ichi chishandiso chinoshanda kwazvo kana izvo zvaunoda chaizvo kubvunza mhedzisiro yeinjini yekutsvaga nguva dzese. Kunze kwekuunza sisitimu iri nyore kwazvo maererano nekutsvaga, ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzekugadzirisa chero rudzi rwechitoro chaicho. Nebhenefiti yakawedzerwa iyo hazvingabhadhari euro imwechete kune vanonyorera sevhisi iyi sezvo iri yemahara zvachose.
Iyo yekuona system inoenderana nekutsanangura kana taura izwi kana chirevo kuitira kuti nhevedzano yemubatanidzwa inogona kubuda izvo zvinosarudzwa nevashandisi. Icho chishandiso chakazara kwazvo nekuti icho chinokutendera iwe kutamba nemazwi nemafungiro kuti uwane mhinduro inoshanda zvakanyanya kupfuura mune mamwe marongero ekutsvaga.
Google Keyword Kuronga kweAdwords
Kubva kuGoogle unogona kuve nemhinduro yakakwana yekusangana nechishuwo icho kushambadzira kwedigital kunokupa iwe. Iyo yakapusa muenzaniso iyo inoitirwa ma profiles ese evashandisi vadiki nepakati. Iyo inokupa iwe akateedzana emhinduro kuitira kuti bhizinesi rako rigone kuve rakamiswa zvakanaka kubva ikozvino Ose kukwezva vatengi vatsva uye kukurudzira kutengesa yezvigadzirwa zvako kana masevhisi.
Iwe haugone kukanganwa izvozvo iwe uri pamberi pechizvarwa cheGoogle chishandiso kutsvaga mazwi akakosha. Uye izvi zvinoreva kuti ndeimwe yeanonyanyo shandiswa pasirese uye nekudaro uchave unokwanisa kusvika kune vakawanda vatengi, vashandisi kana vanyoreri. Chimwe chehunhu hwayo hukuru ndechekuti inoshandisa iyo data kubva kune ino inokosha tekinoroji yekutsvaga injini. Nehupamhi muzviito zvako zvausingawani mune mamwe mainjini ekutsvaga.
Izvi zvakakosha zvikuru kana iwe uchida kuwedzera rako bhizinesi kana rehunyanzvi chirongwa kune dzimwe nzvimbo dzenyika munyika. Imwe yemipiro yake inonakidza pari zvino ndeyekuti anogona kukubatsira pane imwe nguva kuti uwane yakanakisa kiyi kana zvirevo zvekuzadzisa chinangwa chako. Nepo kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kusefa iyi ruzivo zvichibva pane yako yehunyanzvi chiitiko, nyika, mutauro uye mamwe ma parameter eakakosha kukosha.
Google Correlate, chishandiso chinoshanda zvakanyanya
Mukati meiyi kiyi yekutsvaga maturusi, iyi haigone kusavapo, kunyangwe iri zvishoma zvinyanyo kuzivikanwa nevashandisi vasina ruzivo munzvimbo iyi yekushambadzira kwedigital. Kuitika kwayo kunoenderana nenyaya yekuti ine simba zvakanyanya kupfuura vamwe kuti vagadzire runyorwa rwakakura rwemazwi akakosha. Saka kuti iwe uve nechipo chakakura mune dzimwe nzira dzekumisikidza yako blog, chaiyo chitoro kana chero chero dhijitari chiridzwa mune zvemukati.
Neruzivo urwu rwavari kuzokupa, usakahadzika kuti iwe unozogona kukura runyorwa rwemashoko ekirasi kusvika kumatanho iwe ausingafungidzire. Kunyanya kana zvasvika kune longtail keywords uye izvo zvinoda hunyanzvi hukuru pane chako chikamu mukirasi yemabasa mune zvemadhijitari zvemukati. Kusvika padanho rekuti iwe unokwanisa kuzvibatsira pachako pazviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi:
Kutsvaga kugadzirisa mune yehunyanzvi kurapwa kwaunoda pamberi pe chinzvimbo chiri nani mumidhiya yedhijitari.
Vashandisi vachawedzera kugamuchira kune zvaunofunga kuburikidza nemajini ekutsvaga. Mumazuva mashoma iwe unozoona mhedzisiro yezviito izvi kuburikidza neichi chekutanga uye chishandiso chishandiso.
Usatombo kunetseka kana iwe ukapererwa nemazano ekumisikidza iro kiyi kiyi nekuti chishandiso ichi ichagara ichivandudza mazano ako uye pasina chikonzero chekuti iwe uite zvakanyanya mukufunga kwako. Ichachengeta zvese uye nemhedzisiro inoshamisira sezvaungaona kubva zvino zvichienda mberi.
Rubatsiro rwako rwakanyanya kushanda uye nekudaro zvakakosha mukutarisana nematambudziko kumisikidzwa kwemazwi akakosha kuti usvike kuwanda kwevanhu pasi rese.
Tsvaga yakanyanya kutaurwa yakakosha jenareta
Kubva ikozvino zvichienda mberi usakanganwa kuti mamwe makiyi ekushandisa maturusi akanaka kune chero mhando yewebhusaiti. Nekudaro, mamwe anongori akakodzera kune imwe mhando yewebhusaiti. Mupfungwa iyi, uchafanirwa kutsanangura zvaunoda zvichibva mukushandisa kwauchazopa kune ino maitiro atiri kutaura nezvazvo. Kune izvi, zvichave zvakakosha kuti iwe ukoshese aya mapoinzi atichafumura.
La digital bhizinesi kirasi mauri wakabatanidzwa.
Ndeipi iyo chinangwa chemushandisi kwaunoda kutaura.
Rudzii rwe zvigadzirwa, masevhisi uye zvinyorwa unopa kune vanogamuchira mameseji ako.
Kana iwe uchiziva nzira yekuona idzi nyaya, hapana mubvunzo kuti iwe uchave neyenzira refu yekuenda kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoda. Naizvozvo, iwe unenge usina imwe mhinduro pane kupindura iyi mibvunzo kuti uwane yakanakisa kiyi jenareta. Kana zvirinani, iyo inonyatsokodzera iwe izvozvi. Muzviitiko zvese izvi, zvinongoda kufungisisa kudiki pane kwako chikamu.
Keyword In yekubatanidza mazwi pamwe nemumwe
Kune mamwe akaomesesa mazwi ekushandisa ekutsvaga, asi nechikonzero ichocho chinobudirira kuzadzisa zvinangwa zvako zvehunyanzvi. Izvi pasina mubvunzo ndeimwe yeakakwana kwazvo nekuti zvinokubatsira iwe kusanganisa ako akakosha nenzira iri nyore. Kutanga kubva kukiyi yakakosha kiyi, iwe unosvika kune vamwe vasina kukosha zvakanyanya uye vanogona kuvhura nzira yekuti uzviise wega zvirinani mune yedhijitari midhiya.
Unogona gadzira akawanda mabatanidzwa sezvaunoda zvinoenderana neunyanzvi hwako zvido.
Ndicho kuunganidzwa kwemashoko akanakisa uye dzakatarisana mune imwe chete.
Inogona kukukonzera iwe chinja kana shandura rako rekutanga kiyi kune rimwe, rinoshanda uye rakachengeteka.
Izvo zvakanyanya kuomarara mukushandisa kwayo, asi pakupedzisira mhedzisiro yacho ichave inogutsa zvakanyanya pane zvido zvewebsite yako, e-commerce kana chitoro chaicho.
Chidiki diki chekutora yakanakisa kudzoka kuburikidza neiyi kiyi yekutsvaga yekushandisa chishandiso chakavakirwa pa kuyedza nemhando yega yega yemutambo. Iyo yakasarudzika sisitimu sisitimu inowanzo kundikana. Izvo zvinokodzera kuti iwe uzviedze kubva ikozvino zvichienda nekuti mhedzisiro yacho ichakushamisa iwe nekushanda kwayo. Kune izvo, zvichave zvakafanira kuti iwe ubatanidze anotevera ma parameter atinotaura.
Mutsara chaiwo mutsara.
Uye chaiyo machisa.
Dambudziko rayo hombe riri muchokwadi chekuti iwe unozoda kudzidza zvishoma mukushandisa uye kugadzirira kwedhijitari iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Analytics, CRM uye Big Data » 6 makiyi ekutsvaga ekushandisa
Nei uchifanira kudzivirira zvakapetwa zvirimo pawebhusaiti yako?